INDHO-SARCAADKII XALAY: Floyd Mayweather Iyo Manny Pacquiao Oo Dunida Kaga Yaabsaday Kulan Lama Filaan Ah Iyo Sidii Ay Wax Noqdeen Markii Lagu War Helay Iyagoo Dhex Fadhiya Garoon Ay Ka Socotay Ciyaar – Cadalool.com
INDHO-SARCAADKII XALAY: Floyd Mayweather Iyo Manny Pacquiao Oo Dunida Kaga Yaabsaday Kulan Lama Filaan Ah Iyo Sidii Ay Wax Noqdeen Markii Lagu War Helay Iyagoo Dhex Fadhiya Garoon Ay Ka Socotay Ciyaar
Saddex sannadood ka hor kaddib ayay si lama filaan ah uga soo dhex muuqdeen garoon iyagoo ku lebbisan dhar qurux badan, diyaarna aan u ahayn inay feedhtamaan.
Feedhyahannada Floyd Mayweather iyo Manny Pacquiao ayaa xalay indho sarcaad ku riday taageereyaasha iyo kuwa xiiseeya kubadda kolayga kaddib markii ay iskugu soo galeen garoon ay ka dhacaysay ciyaar dhex martay labada kooxood ee La Clippers iyo Charlotte Hornets oo ka dhacday magaalada Miami.
Floyd Mayweather iyo Manny Pacquiao oo feedh ay kasoo xerootay lacag ku dhow hal bilyan oo Dollar saddex sannadood ka hor ku yeedhay dalka Maraykanka, ayaa waxay xalay si diirran iskugu gacan qaadeen garoonka dhexdiisa, ka hor intii aanu siyaasiga, xildhibaanka iyo feedhyahanka reer Philippine ee Pacquiao aanu waqtigii nasashada ka bixin garoonka.
Labada feedhyahan ayaa la filayaa inay wada-xaajood ku yeeshaan dalka Maraykanka maalmahan oo uu Manny Pacquiao ku sugnaan doono Miami oo uu ku qaadanayo tababar uu ugu diyaar garoobayo ciyaar feedh ah oo ay ku ballansan yihiin Adrien Broner.
Ciyaarta ay wada-xaajoodkeeda wadaan labadan feedhyahan ayaa waxa la filayaa inay qabsoonto bisha May ee sannadkan, laakiin waxay noqon doontaa middii ugu lacagta badnayd abid sida la saadaalinayo.
May 2, 2015 ayay Floyd Mayweather Jr. iyo Manny Pacquiao dalka Maraykanka ku yeesheen feedhkoodii ugu qaalisanaa oo lagu tilmaamay Dagaalka Qarniga (The Fight of the Century).
Si kastaba ha ahaatee kulankooda xalay ayaa waxa si weyn ugu sacabo tumay taageereyaasha kooxaha Los Angeles Clippers iyo Charlotte Hornets ee garoonka fadhiyey.